Codso Bombardier Dash-8 Q400
Codso Bombardier Dash-8 Q400 sano 2 10 bilood ka hor #752
Waan jeclaan lahaa haddii (Rikoooo) aad sameyn karti Bombardier Dash-8 Q400. Waan ku jeclahay FSX Alaabada, oo leh faahfaahinta ugu badan ee suuragalka ah, oo cabirkoodu yar yahay. Xaqiiqdii waxaan raadin doonaa Qalabka Bombardier Q400, oo leh VC qurux badan oo qurux badan sida aad ugu dhigto diyaaradaha kale.
Codso Bombardier Dash-8 Q400 sano 2 10 bilood ka hor #753
Hello iyo soo dhawow.
Marka horeba, Rikoooo MA AHAN wax uun FSX add-ons. Waxaan hagaajinaynaa oo ka sii hagaajinaynaa halka aan kari karno, ka hor intaanan u sii diyaarinin soo degsan.
Labaad. Waxaa jira bilaash bilaash ah Dash8 FSX. www.premaircraft.com/DHC8-Q400/
Muuqaal aad u qurux badan, waxay leedahay VC .... laakiin, waxay u muuqdaan inay jajaban yihiin. Waxaan u jeedaa, waad isku dayi kartaa, laakiin qaar ka mid ah waxyaabahaani sax ma aha.
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.174